घर आँगनमा प्रवेश गरेको दशैं (भिडियोसहित) - Emountain TV
घर आँगनमा प्रवेश गरेको दशैं (भिडियोसहित)
कार्तिक १, २०७७ पढ्न ६ मिनेट
नेपालीहरुले महान चाडको रुपमा मनाउने यसपालीको घर आँगनमा प्रवेश गरेको छ । दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना विधिपूर्वक घरघरमा गरिएको छ । यसपालीको दशैं विगतको भन्दा विषम परिस्थितमा हुन लागेको छ । कोरोना महामारीको डरमा पनि नेपालीहरुले मौलिक पर्वको रुपमा दशैंलाई आफन्तसँगको मिलन बिन्दुका रुपमा लिने गर्छन ।
नेपाली मात्रको घर आँगनमा प्रवेश गरेको बडादशंै लगाएतका चाडपर्वहरुले सधैझैं यस विषम परिस्थितिमा पनि एउटा रौनकता थपिदिएको छ । विशेषत वर्ष भरि मै यो चार्डवाड नेपालीहरुको लागि मौलिक छ । राजादेखि रंकसम्म सबैको साझा छ । मित्रवत सम्बन्धको आधारशिला छ । अनि वर्षौेदेखि बिछोडिएका जनहरुको निमित्त मिलन बिन्दु छ । जे छ सबैको लागि काम लाग्ने छ, उत्साह दिने छ, अनि रमाइलोको छ ।
तथापी यस वर्षको परिस्थितिजन्य बाध्यता भने अलग प्रकारको छ । यस वर्षको दशंैले भिडभाडको वातावरणको परिकल्पना गर्देैन । आफ्ना आफन्तहरुसँंगको ज्यादा सम्पर्कलाई पनि रुचाउँदैन । अनि धेरैको बिग्रिएको आर्थिक अवस्थाले गर्दा बजारको चहलपहललाई पनि सीमित नै गरिदिएको छ । तथापी खानेमुखलाई जुगाले छेक्दैन भने जस्तै चाडबाड मान्ने नेपालीको मौलिकता यस वर्ष अझ विशेष मौलिक हुने कुरामा सन्देह छैन ।
हुन त संक्रमणकै बीचमा पनि सरकारले होसियारीपूर्वक अघि बढ्न भन्दै सबै प्रकारका क्रियाकलापहरुलाई खुला गरिसकेको छ । होटल व्यवसाय, बन्द व्यापारदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म खुला गरिएको परिवेशमा चाडबाड केन्द्रित मन्दिरहरुलाई पनि संक्रमण संवेदनशलीतालाई ध्यानमा राख्दै केही खुला गरिदिएको भए नेपालीको आस्था र संस्कृतिको जगेर्ना हुन सक्थ्यो भन्ने मत व्यापक छ ।
सबै क्षेत्रभन्दा मन्दिरहरु नै संक्रमणको लागि हानिकारक हुन र ? अरु क्षेत्रमा लागू गरेको जस्तै संक्रमण व्यवस्थापन गर्दैे सर्वसाधारणको लागि लागि पनि मन्दिर क्षेत्र खुला गरिनु पो पथ्र्याे की ? आज थुप्रै ठाउँहरुमा भिडभाडको अवस्था छ । रात्रीको समयमा तरकारी तथा फलफूल बजारमा हुने भिडभाड देखि महत्वपूर्ण पब्लिक क्षेत्रहरुमा हुने जमघट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मन्दिर क्षेत्रमा त्यो भन्दा कम नै भिडभाड हुन्थ्यो होला ? फेरी मन्दिर जाने मानन्छेहरु सुझबुझ नभएका, उत्श्रृंखल, परिस्थितीलाई बुझ्न नसक्ने प्रकारका पनि त हुँदैनन नि ।
यद्यपी सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । तथापी भगवानको निवास मन्दिरमा मात्रै हुने गर्दैेन । भगवान सर्वव्यापक हो । सबै ठाउँमा समान रुपमा व्याप्त हो । यो भावनालाई दृढ गर्देै अझै चाडबाडको रौनकता थप्नेतर्फ लाग्न सकियो भने चाडबाड पनि सुखद हुन जाने र संक्रमणबाट पनि बच्न सकिने अवस्था रहन सक्छ ।
जेहोस, यो चाडपर्व तडकभडकपूर्ण हुन नजाओस् । विकृत्ति र विसंगतीले ठाउँ पाउन नसकोस् । सबैको मन उत्फुल्लित रहोस् । कुण्ठा र अहंकार जरैदेखि समाप्त हुन सकोस् । असत्यमाथि सत्यको विजय निश्चित छ । सबैलाई दशैंको सुभकामना ।
देश/समाज, राजनीति‐मा वर्गिकृतDashainFestival, NepaliFestival
भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाले दिने सम्मान, अपमानित कालापानी क्षेत्र (भिडियोसहित)
बडा दशैं अन्तरगतको आज दोस्रो दिनः ब्रह्मचारिणी स्वरुपमा भगवतीको पूजा उपासना गरिदैं
कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव गाडिएको कब्रस्तान सिल
४ लाख बराबरको ३९३ थान ट्रयाकसुट बरामद
कुमार बिकमाथी आक्रमण गर्ने २ जना युवक पक्राउ
आँगनमा आएका चाडपर्वहरुले निम्त्याउने परनिर्भरता (भिडियोसहित)
असोज १४, २०७७
आइभरी कोस्ट अफ्रिकन नेशन कपबाट बाहिरिया, मोरक्को क्वाटरफाइनलमा
माघ १२, २०७३
इजिप्ट क्वाटरफाइनलमा, घाना हारेर पनि अघि बढ्यो
भाइरोलोजिष्ट डाक्टर मरासिनीले नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश
असोज २६, २०७७
अवैध रुपमा बालुवा चोर्ने ३५ ट्याक्टर सशस्त्रको नियन्त्रणमा
मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालय दशैँ विदामा खुल्ने